Home Siyaasadda Yaa qaadanaayo Kursiga Wasiirnimo ee Beesha Xawaadle halkaan ka oggoow.
1: Abdullahi Mohamed Ali Sanbaloolshe.
2: Abdirasak Omar Mohamed.
Waxaan u soo qaadanay labaas masuul ee aan kor ku soo xusnay wax kalle maaha ee labadda shaqsi ee uggu dhow madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Somalia 🇸🇴 Hassan Sheikh Mohamud kalsooni iyo wadda shaqeyn dhab ahne kalla dhaxeyso .
Maxaan ugga tagnay 8dii kalle ee Xildhibaan .?
1: Ali Shacbaan Ibrahim waa Gudoomiyaha 1aad ee Aqalka sare manna qaban karyo xil wasiir waanna mid ka mid ah xildhibaanaddii soo saaray Hassan Sheikh Mohamud.
2: Xildhibaan canjeex waa senator manna qaban karyo xilkaan waanna mid kamid ah dadka xassan Sheikh Mohamud kalsoonidda kalla dhaxeyso waanna sidda Ali Shacbaan Ibrahim.
3: Xildhibaanadda kalle maheli karraan wasiir sababtoo ah maaha kuwa lasoo shaqeystay Amma wax ka soo dhistay trainka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Somalia Hassan Sheikh Mohamud.
Waxaa jirro Xildhibaan u codeey Jamaahiirtii loogga awood batay hogaaminta Dalka N&N 3dii wareeg marnaba meel kalle ka aadin waxaanna laggu magacaabaa Xildhibaankaas Mohamed Abdulqadir naneystiisuna waa Garyaqaanka .
Waxa kalle oo jirro Xildhibaan ku halqabsaday Dhiigu maaha biyo codkiisane siiyay Dr Abdinour lagunna magacaabo Mohamed Buraale Raxeeye balse wareegii labaad iyo 3aad codka siiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Somalia 🇸🇴 Hassan Sheikh Mohamud.
Abdirazak Omar iyo Sanbaloolshe.
Sidda aan lawadda socono labadda masuul waa rug cadaayaal aan ladheyelsan karrin waanna saaxiibadda dhabta ah ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Somalia.
Abdullahi Mohamed Ali Sanbaloolshe waxaa laggu sheeggaa innuu yahay Qofka somali-ga ah ee uggu bitiga baddan kursi siyaasadeed.
Abdirasak Omar Mohamed waxaa laggu sheega innuu yahay wallalka labaad ee ladhacay Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud.
Waxaan sugnaaba waa shaqsiga qaata kursiga wasiirnimadda Isha laggu wadda baayo .
Previous articleDaawo:- laba muuqaal iska soo horjeedo Dagaal Maaliyaadd Beesha Xaruun Cali oo ku qadeen Booco Gobolka Hiiraan waxa sheegtay Maamulka Fashilmay ee Gobolka Hiiraan iyo Ciidamada DFS
Next articleXog: Sarkaal awood badan ku leh NISA oo is-casilaad u geeyey Mahad Salaad
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Ganacsatada Soomaalida Kenya kala hadlay gurmadka Abaaraha